दशैंबारे के भन्छन् समाजवादी चिन्तकहरु ? (बहस)
साम्राज्यवादी, सामन्तवादी साथै अहिले संशोधनवादी संस्कृति पनि आएको छ । द्वैधवादी संस्कृति पनि आएको छ । द्वैधवादी संस्कृति पनि खतरनाक छ । यसलाई पुँजीवादी संस्कृति भनिन्छ तर यो पनि सबैमा छ ।
चैतन्य (वरिष्ठ मार्क्सवादी सौन्दर्य चिन्तक)
कम्युनिस्ट भनिनेहरूमा पनि सांस्कृतिक द्वैधवाद देखापरेको छ । यसका विरुद्ध हामीले सशक्त सङ्घर्ष गर्नु जरुरी छ । हामीले समाजलाई बुझ्ने मात्र होइन, बदल्ने पनि हो । त्यसकारण विकल्प के हो त, यो कुरा आएको छ । यसलाई बहसमा लैजानुपर्छ । विगतमा हामीले दसैँँतिहार मनाइयो । धर्म मानेर मात्रै दसैँँतिहार मनाइएको हो भन्ने मलाई लाग्दैन । १५ दिन बिदा दिन्छ । भेटघाट गर्नु छ । गाउँघरमा गएपछि सामाजिक कुरा हुन्छ । थुप्रैथुप्रै कुराहरू हुन्छन् ।
तिहार पनि मनाउने गरिएको छ । त्यो धर्म मानेर मात्र मनाइएको होइन । प्रमुख त राज्यसत्ता हो । सत्ताले पुरानो संस्कृतिको आडमा स्वार्थसिद्ध गर्ने काम गर्छ र पुरानो तरिकाले दसैँँ मनाउँछ । यही नयाँ सत्ता आउने हो भने सहिद दिवस मनाइन्छ । दसैँँ भनेको कुरूप पक्षमाथिको विजय हो । हामीले पनि देशका लागि बलिदान भएका सहिदको सम्झनामा मनाउने हो । १५ दिनको दसैँँको सट्टामा बरु ७ दिनको सहिद दिवस मनाउँला । कसरी हुन्छ, विकल्प दिन जरुरी हुन्छ ।
परम्परागत संस्कार र संस्कृतिको वैज्ञानिक र व्यावहारिक विकल्प खोज्नुपर्छ । संस्कृतिको कुरा गर्दा चाहे सत्तारूढ होस्, चाहे पिछडिएको होस्, त्यो त्यसै आएको हुँदैन । संस्कृति तत्कालीन समाजको आवश्यकताअनुसार पैदा भएको हुन्छ । समाज विकासका क्रममा जुन वस्तुगत जीवनको विकास हुन्छ, त्यसले नयाँ संस्कृतिको माग गर्दछ । पछौटे चेतना भएका मान्छे पुरानै चेतनामा रहन चाहन्छन्, अग्रगामी विचार भएकाले नयाँ र वैज्ञानिक संस्कृति निर्माण गर्न चाहन्छन् ।
वस्तुगत आवश्यकताअनुसार नयाँ संस्कृति बनाउन चाहने र पुरानै चाहीराख्नेबीच टक्कर हुन जान्छ । पुरानो संस्कृति भत्काएर नयाँ निर्माण गर्न सुरु गर्दा दुई संस्कृतिबीच टक्कर भएके छ । त्यस्तो ठाउँमा नयाँ संस्कृति अभिव्यक्त भएको छ । यो जीवनवादी र वैज्ञानिक संस्कृति हो । यो आवश्यक छ र अनुकरणीय पनि छ ।
कम्युनिस्ट आन्दोलनमा संस्कारका रूपमा केही रूढिहरू पनि छन् । जस्तै : जनवादी बिहे भन्ने तर छोरीलाई दाइजो पनि नदिने र अंश पनि नदिने । छोरीलाई दाइजो दिनुपर्छ भनेर कयौँ मान्छेले कम्युनिस्टले गर्ने गरेको जस्तो प्रगतिशील बिहे गर्ने अनि दाइजो पनि नदिने, सम्पत्ति पनि नदिने गरेका छन् । त्यो ठीक होइन । प्रगतिशील विवाह भनेको त जनवादी राज्यसत्ताले माग गरेको प्रणाली हो । यसमा त पहिला केटा र केटीबीच प्रेम हुनुप-यो । छोरीलाई अंश दिएको हुनुप-यो । विचारमा समानता हुनुप-यो । पण्डित बाजे र लमीको सट्टा कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा नेता लमी बन्छ । बिहे हुन्छ अनि जनवादी बिहे भनिहाल्ने ! यस्तो हुँदैन । यस्ता थुपै्र रूढिहरू छन् । यस विषयमा अलि लामो छलफल चलाउनुपर्छ ।
जनवादी बिहेको कुरा गर्दा पनि कम्युनिस्टको जीवन त मलामीको यात्रा होइन होला नि ! त्यसकारण बिहे त रमाइलो हुनुप-यो नि ! प्रगतिशील बिहे पनि रमाइलो हुनुप-यो । नाच्नुप-यो । सम्भव छ भने मीठो खानु पनि प-यो । बाजासाजा हुनुप-यो । भैँसीले त म्युजिक बजाएपछि बढी दूध दिन्छ भन्ने अनुसन्धान भइरहेको समयमा हामीकोमा एउटा बाजा पनि हुनु नपर्ने । खगेन्द्र सङ्ग्रौलालाई प्रमुख अतिथि राखेर प्रगतिशील बिहे गर्ने अनि घर लगेर सिन्दुर लगाइदिने, यस्तो पनि भइरहेको छ प्रगतिशील भन्ने बिहे प्रणालीमा । यस्तो हुनु हुँदैन । बिहे भन्ने चीज थोरै त रमाइलो पनि हुनुपर्छ ।
उता शोक कार्यक्रमहरू पनि शोक जनाउने किसिमका हुनुप-यो । मान्छे मर्दा थुप्रै मान्छे रुनुप-यो । हो, श्रद्धाञ्जली भनेपछि शोकमग्न वातावरण हुनुप-यो । जस्तै, रातो वा रङ्गीचङ्गी भनेको रमाइलो हो भने सेतो लगाएर कपाल फिँजाएर बस्दा नरमाइलो हुने भयो । किरिया बस्ने चलन त्यसरी पो आएको हो कि ! के हो त शोक मनाउने भनेको ? हामी हाम्रा अग्रजहरूलाई सम्झेर शोक मनाउँछौँ । पछि वर्गसङ्घर्षका क्रममा शासकहरूले आफ्नो अनुकूलमा गरुडपुराणसम्म ल्याइदिए । शोक मनाउन हामीले नयाँ चलन चलाउनुप-यो ।
अमर गिरी (प्रगतिशील लेखक)
२००६ सालमा नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएको थियो । पार्टी स्थापना भएको आज धेरै वर्ष बितिसकेका छन् । हामीले निरन्तर सांस्कृतिक रूपान्तरणको कुरा उठाउँदै आएका छौँ । तर यतिलामो समय बितिसक्दा हामी कहाँनेर छौँ भन्ने कुरा मननीय छ । नेपाली समाजको सांस्कृतिक रूपान्तरणको कुरा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनसँग जोडिएको छ । कम्युनिस्ट आन्दोलनको सांस्कृतिक रूपान्तरण सफल हुँदा नै समाजको रूपान्तरणको काम गर्न सक्छौँ ।
हामीले नेपालमा सामन्तवादी संस्कृति र त्यसको मात्रै रूपान्तरणको कुरा गरेर यो आन्दोलनलाई ठीक ठाउँमा पु-याउन सक्दैनौँ । सामन्तवादी–पुँजीवादी संस्कृति, त्यसले नेपालमा पारेको प्रभाव र त्यसको गठजोडबारे पनि व्यापक छलफल गरेर हामी निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ । संस्कार र संस्कृतिको रूपान्तरणको कुरा गर्दा हिन्दु धर्मसंस्कृतिमाथि बढी आफूलाई केन्द्रित गर्ने गरेका छौँ । यसैले जकडेकाले यसमा केन्द्रित हुनु ठीकै हो तर यसका साथै समग्र नेपाली संस्कृतिमाथि नै हामी केन्द्रित हुनु जरुरी छ ।
संस्कृति र संस्कार रूपान्तरणको सन्दर्भमा दुईवटा कुरा रहन्छन् : एउटा, यो क्रमिक रूपमा, बिस्तारै रूपान्तरण हुँदै जान्छ । अर्को, यसको रूपान्तरणका लागि हामीले सचेतन प्रयत्न गर्नुपर्छ जसको माध्यमबाट हामी यसको रूपान्तरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ र आफ्नो उद्देश्यअनुसार हामी यसलाई लिएर जान्छौँ । यहाँ हामीले गर्न खोजेको कुरा हस्तक्षेपकै हो । हो भने हामीले अगाडि सार्नुपर्ने विकल्पहरू केके होलान् । रूपान्तरणको कुरा गरेर मात्रै पनि हुँदैन । नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन र यससँगै निरन्तर चलिरहेको सांस्कृतिक धरातल र यसको परिणतिलाई अगाडि राखेर हेर्दा कुरा गरेर मात्र सांस्कृतिक रूपान्तरण हुँदैन । हामीले पक्कै पनि त्यसका विरुद्ध ठोस विकल्प लिएर मात्र अगाडि जानुपर्छ ।
संस्कृतिको विधि बनाएर एकाएक लागू गर्न पनि सकिन्न । सांस्कृतिक रूपान्तरणको जटिलतालाई बुझेर मात्र हस्तक्षेप गर्नुपर्छ किनकि यो धेरै जटिल समस्यासँग जकडिएको छ । आत्मिक पक्ष जोडिएका कयौँ पक्षहरू छन्, तिनलाई हस्तक्षेप होइन, रूपान्तरणको दिशामा गएर परिवर्तन गर्न सक्छौँ । अलिकति छलफल र विमर्शको माध्यमबाट हामीले जन्म, मृत्यु र बिहे संस्कारलाई बदल्न सक्छौँ । मानवजीवनका यी तीनवटा महत्वपूर्ण घटना छन् । यसलाई प्रगतिशील विधिमा बाँधेर अगाडि लैजाने प्रयत्न गर्नुपर्छ ।
कम्युनिस्ट आन्दोलनको सांस्कृतिक रूपान्तरण कसरी गर्ने ? यो समस्या सबै कम्युनिस्ट पार्टीमा व्याप्त छ । कतै बढी छ, कतै कम छ । एउटा कम्युनिस्ट पार्टी सैद्धान्तिक, वैचारिक र राजनीतिक रूपमा सही ठाउँमा उभिए पनि सर्वहारावादी सांस्कृतिक मान्यता पनि सही ठाउँमा उभिएको हुन्छ भन्न सकिन्न । सिद्धान्त ठीक भएर मात्र हामीले सांस्कृतिक आन्दोलन सही रूपमा अगाडि बढाउन सक्दैनौँ । त्यसैले यो प्रश्नलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ ।
माओले जो निरन्तर सांस्कृतिक क्रान्तिको कुरा गर्नुभएको छ, यसमा त्यो गम्भीर रूपले जोडिएको छ । संसार बदल्न हिँडेको कम्युनिस्ट पार्टी र त्यसका नायकहरूले त्यस्तो विशिष्ट गुण आर्जन गर्नुपर्छ । त्यस्तो गुण भएको नेतृत्वको अभाव छ । जसको अनुहार हेरेर रातमा निदाउन सकिन्छ । सुख र दुःखको बेलामा भरोसा गर्न सकिन्छ । त्यसकारण कम्युनिस्ट आन्दोलनको सांस्कृतिक रूपान्तरण आजको ज्यादै महत्वपूर्ण एजेन्डा हो ।
डीआर पोखरेल (प्रगतिवादी संस्कृतिकर्मी)
शशिधर भण्डारी (प्रगतिशील लेखक)
रूढिग्रस्त कुरा हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा मात्रै छैन । पश्चिमा दर्शन हे-यौँ भने पुनर्जागरण कालभन्दा अगाडि मध्ययुगमा स्वर्ग जाने टिकट बिक्री हुन्थ्यो । पापमोचनपत्र बिक्री हुन्थ्यो । मार्टिन लुथर किङजस्ता मान्छेले त्यसको विरोध गरे । मार्टिन लुथरको सङ्घर्षपछि युरोपमा एउटा लहर आयो । पुरातनवादी संस्कृतिका विरुद्ध सङ्घर्ष नगरीकन परिवर्तन नहुँदो रहेछ भन्ने कुरा युरोपको इतिहासबाट थाहा पाउन सकिन्छ । पूर्वीय दर्शनमा त्यसरी पुनर्जागरणको युग आएन । हामी ह्वाङ होलगायतको सभ्यता पढ्छौँ । त्यसलाई अवशेषका रूपमा मात्र हेर्छौं । गङ्गा नदीको मैदानमा हुर्किएको आर्यको वैदिक सभ्यता निरन्तर बगिरहेको छ । यसमा केही वैज्ञानिक कुराहरू पनि छन् ।
संस्कार/संस्कृतिलाई नउठाउने भन्ने होइन । हाम्रा विभिन्न भाषाभाषी र धर्मसंस्कृति छन् । यो नेपालीको सम्पत्ति हो । यसलाई वैज्ञानिक बनाएर जानुपर्छ । परिमार्जित गरी नयाँ बनाउनुपर्छ । नबदलिने भए सतीप्रथा रहिरहन्थ्यो । किरिया गर्ने समय १३ वर्षबाट १३ दिनमा झ-यो ।
प्युठानमा अङ्ग्रेजी पढ्न खोज्दा मोहनविक्रमले गाई खाने विद्या लियो भन्थे रे । २०३८ सालमा म र एकजना मगरले सँगै भात खाँदा बहिष्कार गर्नुपर्छ भन्थे । आज समाज यहाँ आयो । समाज बदलिँदै जान्छ तर यसलाई गुणात्मक रूप दिनुपर्छ । हामीजस्ता अभियन्ताको आवश्यकता पर्छ । यताबाट अशोकजीले यसको अगुवाइ गर्नुभएको छ । यो धेरै राम्रो छ । हामी बदलिँदै जाँदा नयाँ संस्कृति पनि निर्माण हुँदै जान्छ । माक्र्सवादी ढङ्गले त्यसलाई बुझ्नुपर्छ ।
तर संस्कृति निर्माणका लागि हामी पाखण्डी हुनु हुँदैन । सम्झाउँदै बुझाउँदै जानुपर्छ । यसैगरी बौद्धिक बहस जारी राख्नुपर्छ । संस्कार र संस्कृति अवश्य बदलिन्छ । अशोक सुवेदीजीको पहलमा हितप्रसाद उपाध्याय जूनमाया सुवेदी साहित्य प्रतिष्ठानले यसरी रामेछापसम्म ल्याएर सांस्कृतिक रूपान्तरणमा सचेततापूवर्क बहस आरम्भ गराएको छ, यो अत्यन्त महत्वपूर्ण, सराहनीय र अनुकरणीय काम हो ।
प्रा. डा. रामप्रसाद दाहाल (शिक्षाविद्)
नारायण शर्मा ‘कमलप्रसाद’ (प्रगतिवादी संस्कृतिकर्मी)
कुनै संस्कार–संस्कृति रूपमा फरक भए पनि सारमा फरक नहुनेप्रति सजग हुनुपर्छ । राजा मान्ने संस्कृति त्याग गरे पनि राजाजस्तै शक्तिशाली नेता, प्रशासक, पैसावाल वा सत्तावाललाई मान्ने संस्कार–संस्कृतिको विकास हुने–गर्ने गर्नु हुँदैन, तिनको रूप फरक भए पनि सार एउटै हो ।
(केही समयअघि काठमाडौँमा नयाँ संस्कारको खोजी गर्दै आयोजना गरिएको गोष्ठीमा व्यक्त विचारको सार ‘परम्परागत संस्कार–संस्कृतिको विकल्पको खोजी’ पुस्तकबाट लिइएको हो– सम्पादक)